Ciidamada Soomaaliya iyo Amisom oo Alshabaab kala wareegay Ceelbuur – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Soomaaliya iyo Amisom oo Alshabaab kala wareegay Ceelbuur
Ceelbuur – Mareeg.com: Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa maanta 26/03/2014 la wareegay gacan ku heynta degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud, kadib dagaalo ka dhacay duleedka degmadaas.
Ciidamada Soomaaliya iyo Amiosm ayaa 4 maalmood ku jiray jidka u dhaxeeya Dhuusamareeb iyo Ceelbuur, waxeyna wadada kula kulmeen dhowr weerar oo dhabagal ah.
Afhayeenka AMISOM Col. Cali Aadan Xumud ayaa VOA u sheegay in ciidamadooda iyo kuwa Soomaaliya manta Alshabaab kala wargeegeen degmada Ceelbuur oo saldhugweyn u aheyd Alshabaab.
War qoraal ah oo la soo dhigay barta Facebook ay ku leeyihiin AMISOM ayaa lagu sheegay in Ciidamada dowladda iyo AMISOM ay la wareegeen degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud.
“Ciidamada Soomaalida oo taageeraya AMISOM waxay qabsadeen magaalada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud, ciidamada waxay ka dhaqaaqeen Xarunta dhuusa Mareeb saddex cisho ka hor, iyagoo qabsaday dhowr tuulooyin” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo la soo dhigay barta Facebook.
AMISOM ayaa sheegtay in dhowr weerar gaadmo ah ay Al-Shabaab ku qaadayeen ciidamada, intii ay ku soo wajahnaayeen Ceelbuur, ayna qabsanayeen tuulooyinka u dhow dhowaa.
Ciidamada AMISOM ee ka socda Itoobiya ayaa fariisin ka sameystay duleedka degmada Ceelbuur, waxaana maqan isgaarsiinta degmada.
Wararka ayaa sheegaya in dadkii ku noolaa degmada ay isaga barakaceen, waxaana jiray duqeyn xoogan oo loo geystay degmada ka hor inta aan gudaha u gelin ciidamada huwanta.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Galgaduud C/xakiim C/llaahi Warsame oo isagoo ku sugan Ceelbuur la hadlay VOA ayaa sheegay in dadkii ku noolaa degmada Ceelbuur ay halkaas ka barakaceen, isagoo xusay iney magaalada uga cararen labo sababood oo kala ah: iyagoo ka baqay in lagu dul dagaallamo iyo Alshabaab oo shacabka ku amray iney magaalada ka baxaan haddii ay soo galaan ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM.
Alshabaab weli kama hadlin warka kazoo baxay AMISOM ee lagu sheegay in laga qabsaday degmada Ceelbuur oo muhiimad weyn u leh Alshabaab.
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Ahlusuna Waljamaaca ayaa horay uga baxay degmada Ceelbuur bishii June ee sandkii 2012, kadib dhowr bilood oo ay halkaaas gacanta ku hayeen, lamana sheegin sababtii xilligaas ciidamada huwanta ah uga baxeen Ceelbuur.
Shariif Xasan oo lagu qasbay inuu ka laabto Baydhabo kadib 3 maalmood oo rabshado ah
Kenyan army accused of undermining security in the region, says Jubba official